Inodzivirira Coverall Naiye ...
Disposable zvokurapa protecti ...
Mirayiridzo yeKushandisa kweDziviriro Coverall Chigadzirwa Zita: Inodzivirira Coverall Model / Yakatarwa Model: Imwe-chidimbu Coverall, Maviri-chidimbu Coverall Magadzirirwo: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL Structural Composition Ichi chigadzirwa chine mhando mbiri: one-chidimbu chekuvhara uye maviri-chidimbu chekuvhara, chinosanganisira hood, zvipfeko uye bhurugwa, ine elasticated cuff, ankle, hood uye chiuno, uye yakasonerwa nemberi yekuzvivharira zipi. Icho chigadzirwa hachina-chena, chinoraswa uye chakasonwa ne PE firimu compos ...
Mirayiridzo yeKushandiswa kweDisposable Isolate Gown Chigadzirwa Chigadzirwa: Disposable Isolate Gown Brand: SUREZEN Model / Magadzirirwo MODEL: SZ400 Ruvara rwebhuruu, reversible chimiro. Magadzirirwo: S, M, L Structural Kuumbwa: Chigadzirwa hachina kuchena, chinoraswa uye chakasonerwa ne43% SMS firimu (15gms) rinoumbwa 57% isina-yakarukwa jira (20gms). 1. Chitarisiko: chimiro chekuvhara chichava chakaoma, chakachena uye chisina hosha. Hapana kunamatira, kutsemuka, gomba uye zvimwe zvikanganiso zvinotenderwa pamusoro. Iko kusona s ...
Inodzivirira Coverall Nechekupisa-Kuisa Tepi
Mirayiridzo yeKushandisa Kudzivirirwa kwekuvhara pamwe neyekupisa-yekuisa chisimbiso tepi Chigadzirwa Chigadzirwa: Inodzivirira yekuvhara pamwe nekupisa-yekunamatira tepi Model / Magadzirirwo Model: Imwe-chidimbu Coverall Magadzirirwo: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL Chimiro Dhizaini Chigadzirwa ichi chimwe-chidimbu chakafukidzwa, chine hood, bhurugwa rekupfeka, uye bhutsu yekuvhara neyakaomeswa cuff, ankle, hood uye chiuno, uye yakasonerwa neiyo yekumberi yekuzvivhara zipi. Misono inofanirwa kuvharwa netepi yekuisa-kupisa. Chigadzirwa chacho chinoraswa ...
Chigadzirwa chedu chine rupo, chakaringana muchipfuva nemapendekete, rakasungwa chiuno rinoisa kune yakasarudzika nyaradzo, & yakavanzwa inobvaruka muchiuno nemutsipa kuti ive yakachengeteka kukwana. Iyi anti-static zvipfeko zvakavakirwa zvekushandisa, kugona & kutarisirwa kuri nyore, kunyangwe zviine hukasha kana kushatisa basa. Inogadzikana asi ichifema poly-donje twill inoramba kupera, kuunyana uye mavara. Isu tinogadzira anti-static T-shirts, anti-static jackets, anti-static yechando zvipfeko zvimwe zvigadzirwa zvinoshandiswa ne petrochemical bhizinesi ...
Ichi chigadzirwa chinotora matatu-firita kusefa. Iwo makuru ekugadzira maitiro anosanganisira kusungunuka kunoputika, spunbond, mweya unopisa kana kubaya tsono, nezvimwewo, zvine basa rekudzivirira zvinwiwa, kusefa zvidimbu uye mabhakitiriya. Yakazara magiraidhi, zvigadzirwa zvakavimbiswa, matatu-masara firita meltblown jira + isina-yakarukwa jira dziviriro nhanho yakakwira, basa uye chikoro kubuda, gara wakarinda, yakakosha zhizha maitiro, mwenje uye unofema, Inokodzera kumeso, hairegedze, yakaderera kuramba , haina kubata mweya, yakadzika-yakasununguka nzeve tambo, yakasununguka kupfeka uye haisimbise nzeve.
Iyo N95 maski ndeimwe yeanopfumbamwe masisitimu ekudzivirira masiki anozivikanwa neNIOSH. "N" zvinoreva kusapikisa mafuta. "95" zvinoreva kuti kana ikaburitswa kune yakatarwa nhamba yezvinhu zvakakosha zveyedzo, iko kusungwa kwemukati mukati mechifukidzo kunodarika 95% kuderera pane iyo yakasungwa kunze kwemask. Iko kukosha kwe95% hausi wepakati, asi hushoma. N95 harisi rakasarudzika zita rezvigadzirwa. Chero bedzi ichisangana neN95 standard uye ichipasa iyo NIOSH ongororo, inogona kunzi "N95 mask". Chikamu chekudzivirira cheN95 chinoreva kuti pasi pemamiriro ekuyedza anotsanangurwa mumatanho eNIOSH, kusefa kweiyo masikisi firita zvinhu kune zvisina mafuta oiri (senge guruva, mhute yeasidhi, mhute yependi, tupukanana, nezvimwewo) zvinosvika 95%.
Disposable zvokurapa anodzivirira chifukidzo
Masikirini ekudzivirira ekurapa akakodzera kuchengetedzwa kwevashandi vezvekurapa uye nevashandi vane hukama kubva kuzvirwere zvinotapukira zvinotapukira mumhepo. Iyo mhando yepedyo-yakakodzera yekuzvidzora-yega yekuchenesa yekurapa yekudzivirira michina ine yakakwira dziviriro, kunyanya inokodzera kuburitswa nemhepo panguva yekuongororwa uye yekurapa zviitiko kana kana ikapfekwa nevarwere vane hutachiona hwehutachiona hunopararira nemadonhwe padyo padyo, danho iri yemask inogona kusefa maturu mumhepo uye ichivhara zvinosvibisa zvakaita semadonhwe, ropa, mvura yemumuviri, uye masevhisi. Iko kusefa kwekuchenesa kweasina-oiri ma particles anogona kusvika 95 Kumusoro% inosvika padanho reN95, inova inowanzo shandiswa yemunhu yekudzivirira yemidziyo yezvirwere zvemumhepo. Iyo ine kukodzera kwakanaka nechiso chemupfeki uye ndeye-imwe-nguva yekushandisa chigadzirwa. Masikirini ekudzivirira ekurapa anokwanisa kudzivirira utachiona hwakawanda sehutachiona nemavhairasi. WHO inokurudzira kuti vashandi vezvokurapa vashandise masiki ekudzivirira maratidzi ekudzivirira hutachiona hutachiona mumhepo yechipatara.
Nzeve yakaiswa mask
Masiki ekurapa anoraswa anoshandiswa kuvharira mapiritsi kubva mudumbu nemumhino, uye anogona kushandiswa pakurapa kwehutsanana munzvimbo dzakajairika dzekurapa. Iyo inokodzera zviitiko zvakajairika zvehutano, senge kuchenesa kwehutsanana, kugadzirira kwemvura, kuchenesa machira emubhedha, nezvimwewo, kana chipingaidzo kana kuchengetedzwa kwezvimedu kunze kwepathogenic microorganisms senge mukume.
Ichi chigadzirwa chinoshandisa matatu-firita firita, iyo inogona kunyatso kusiyanisa hutachiona zvidimbu pasina kubata mweya wako uye zvinobudirira kudzivirira huni, mukume, uye guruva. Yakazara magiraidhi, zvigadzirwa zvakavimbiswa, matatu-masara firita meltblown jira + isina-yakarukwa jira dziviriro nhanho yakakwira, basa uye chikoro kubuda, gara wakarinda, yakakosha zhizha maitiro, mwenje uye unofema, Inokodzera kumeso, hairegedze, yakaderera kuramba , haina kubata mweya, yakadzika-yakasununguka nzeve tambo, yakasununguka kupfeka uye haisimbise nzeve.
Mirayiridzo yeKushandiswa kweKurasikira Isolate Shangu Kavha Chigadzirwa Chigadzirwa: Inoraswa Isolate Shangu Yekuvhara Model / Ruzivo Mhando: Yakajairwa Rudzi (Seams isina kupisa-yekunamatira tepi), Kupisa-Kuisa chisimbiso Tepi Rudzi (Seams ine kupisa-yekuisa tepi). Structural Zvinoumba Chigadzirwa hachina-chena, chinoraswa uye chakasonwa ne PE firimu rinoumbwa risina-rakarukwa jira (main material). Kune iyo Yekudzivirira-yekuisa Tepi Rudzi, iwo seams anofanirwa kuvharwa netambo-yekuisa chisimbiso tepi, ine yakakwira simba uye chipingamupinyi kuita. Chigadzirwa P ...